“अन्तत : ब’रामद गरिएको २३ किलो सुन दुई घण्टापछि नै सुनजस्तो देखिने बस्तु भयो”! – Online Saptarangi
October 18, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on “अन्तत : ब’रामद गरिएको २३ किलो सुन दुई घण्टापछि नै सुनजस्तो देखिने बस्तु भयो”!
काठमाडाैँ । शनिबार पर्सा प्रहरीले ब’रामद गरेको २३ किलो सुन दुइ घण्टामै सुनजवस्तो देखिने बस्नु भएको छ । शनिबार अपराह्न ४ बजेर १३ मिनेटमा २२ किलो ६७५ ग्राम सुन ब’रामद गरेको समाचार भाइरल बनेको थियो । पर्सा प्रहरीले पठाएको विज्ञप्तिबाट सबैले करिब २० करोड मूल्यको सुन ब’रामद भएको समाचार दिए ।
तर, पर्सा प्रहरीले दुइ घण्टापछि विज्ञप्ति सच्याउँदै सुनजस्तो देखिने बस्तु ब’रामद भएको जनाएको छ । ब’रामद हुनासाथ सुन भनेर विज्ञप्ति पठाएको पर्सा प्रहरीले नै साँझ ६ बजेर २१ मिनेटमा अर्को विज्ञप्ति पठायो । जसमा उल्लेख थियो,
२२ किलो ६७५ ग्राम सुन ब’रामद भएको भनिएकोमा सुनजस्तो देखिने पदार्थ भएकाले सच्याइएको उल्लेख छ । यसअघि पनि सुन ब’रामद भएर पितल बनेको धेरै घ’टनाहरू भएका कारण यसमा पनि धेरैले शं’का गरेका छन । यद्यपी विस्ताै सबै तथ्यहरू बाहिर अाउँदै जानेनै छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **